Pear "cathedra" isi osisi ọrịa na pests - Akuru - 2019
N'oge oge mmepe mmepe nke ugbo ugbo, ọ dị mfe ịchọta ụdị ube nke kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ ụfọdụ. E nwere ọtụtụ pears, site na nchịkọta ndị a na-akpọ "ọrụ". "Ụdị ọrụ" na-anwale oge na iche pears. Ndị a na-agụnye "katidral" pear, merie ịhụnanya nke ndị na-elekọta ubi n'ihi na ọ dị mfe nlekọta na ihe a ga-ahụ anya. Ma, dịka ọ na - emekarị, iche iche iche nke pears, gụnyere pọọsụ ngalaba, na - arịa ọrịa dị iche iche na pests.
Ihe mere na pears na-eregharị, ma ọ bụ otu esi emeso moniliasis
Ngwurugwu oji, otu esi echebe ube site na nkpuru osisi
Rust na epupụta: ihe ị ga-eme?
Green aphid na ube, esi tufuo oke egwu
Ụzọ nke na-eme ihe atụ na hawthorn ube
Gini mere ogwu ji egosi na ube, na otu esi agha ha
"Ubi agha nke onye iro": otu esi echebe ube site na onyonyo
Mealy igirigi, esi echebe ube si na-acha ọcha scurf
Otu n'ime ọrịa ndị kachasị dị ize ndụ nke pears bụ cat's powder si na nke sitere na ya. Ọrịa a na-emetụta ọ bụghị nanị pears, kamakwa osisi ndị ọzọ dị n'ubi ahụ. Ọ dị ka oge ntoju na-acha ọcha na-acha akwụkwọ ndụ na mkpụrụ osisi. Ihe ịrịba ama ndị mbụ na-egosi na-acha akwụkwọ ndụ, karịsịa n'elu, wee gbasaa ọsọ ọsọ na osisi. Ntu a na-emetụta uto nke epupụta na-eto eto Ome. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ọrịa ahụ, akwụkwọ na ị ga-akọrọ ma daa.
Ọ dị mkpa! Mmiri nke Mealy na-ebu na ọ na-ebugharị ngwa ngwa gaa na osisi ndị ọzọ dị n'ubi gị.
Ọnọdụ ihu igwe na-emetụta ọnụego nke mmepe nke ọrịa a, ebe ọ na-ebelata ihe ọkụkụ na-eguzogide nje dị iche iche na pests. Egwu ahụ na-adabere na epupụta na-ata ahụhụ site na enweghị mmiri, na-eme ka ha ghara ịdị ngwa.
Mgbe ahihia siri ike, ndị na-elekọta ubi na-ekpochapu ụmụ okorobịa ma na-ere ha ọkụ ka ero ghara igbasa osisi ndị ọzọ. Ọzọkwa, a na-emepụta osisi niile ugboro abụọ na oge maka prophylaxis. A na-eme nsị mbụ na mmalite oge opupu ihe ubi, mgbe buds na-amalite na oge ntoju.
Ị ma? Ọ kachasị mfe ịchọpụta ọrịa ahụ n'April ma wepụ ya ngwa ngwa, ma ọ bụghị ya, August ga-anwụ.
A na-emegharị spraying nke abụọ mgbe ọ na-agbapụ buds. Gwa ngwakọta nke ọgwụ ọjọọ Terramycin 100 ml, Streptomycin 250 ml, penicillin 100 ml - 1: 1. Na nmalite mmalite nke nro, nsị soda na ncha na-enyere (lita 12 na mmiri 40 ncha, 48 g nke soda).
Ọ bụrụ na onye na-elekọta ubi hụrụ na o nwere pears na mwute ya, mgbe mgbe, ọ na-etinye ya na ọnọdụ ihu igwe. Ma, o yikarịrị, ube dara ọrịa moniliozom.
Moniliosis bụ ọrịa na-adịghị mma ma buru ibu. Oge ọ bụla ọ na - emetụta mkpụrụ osisi a kụrụ n'ubi, ọ bụghịkwa ichebe ube ngalaba ahụ. Ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ọrụ moniliosis dabara na oge nke ube.
Ọrịa a na-egosipụta onwe ya n'ụdị abụọ: ọkụ ọkụ na mkpụrụ osisi ire ere. Mkpụrụ mkpụrụ osisi na-agba ọsọ ngwa ngwa ma gbasaa ngwa ngwa. Na mbụ, ọ na-egosipụta onwe ya dị ka obere speck brown nke na-ekpuchi nwa ebu n'afọ n'ime 3-5 ụbọchị. N'elu ebe a gbasaa mbara, a na-akpụ akpụ akpụ ọcha-acha ọcha - nke a spores nke ero Monilia fructigena.
Ị ma? Egwu na-agbasa na ọnọdụ oké iru mmiri, ma ọ bụrụ na ihu igwe dị ọkụ, ọ nwere ike ọ gaghị amụba.
Ụdị nke abụọ nke ọrịa a bụ ọkụ ọkụ, bụ nke zuru ebe nile n'ógbè ndịda nke Russia. Na ụdị a, okooko osisi, osisi osisi na osisi ube na-atụgharị na-acha aja aja na nkụ. Nri ahụ na-arụ ọrụ nke ọma n'oge oge okooko osisi ahụ, mgbe ebuliri elu mmiri dị elu.
Ọ dị mkpa! Ngwurugwu ahụ na-abanye n'ime ọnyá ma mebie mgbidi nwa ebu n'afọ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe a na-egbutu pears na-emegiderịta onwe ha, a ga-ehichapụ ihe mkpuchi wax na mkpuchi mkpuchi ahụ mebiri emebi.
E nwere ụzọ dị iche iche na-esi edozi ụdị ero a. Usoro kachasị dị irè: n'oge oge na-eto eto na n'oge ọdịda, ọ dị mkpa iji bibie mkpụrụ osisi dara ada - isi mmalite nke moniliosis, ma echefukwala banyere pears na-atụgharị n'elu osisi.
Maka igbochi, ndị na-elekọta ubi na-eji osisi ọgwụ egwu egwu. A ghaghị imepụta spraying n'otu oge mgbe wormshawk na-apụta, ma kwuoghachi usoro ọgwụgwọ a ọ bụla n'ime izu 2-3.
Na mpaghara ebe a na-arụ ọrụ horticultural dị elu, nnukwu ọrụ na-aga n'ihu iji bibie ero nchịkwa. Iji mee nke a, na ọdịda, ọkụ na-ada ada rere ure mkpụrụ osisi na fọdụrụ epupụta. A na-agwọkwa osisi na ndị na-egbu egbu n'oge e guzobere inflorescences na ngwa ngwa mgbe okooko.
Ị ma? N'oge opupu ihe ubi, mgbe oyi na-acha oyi na-acha, mmadụ nwere ike ịhụ ebe ọkụ ọkụ dị ọkụ.
Ọrịa ọzọ nke na-emetụta ube ngalaba bụ ero ojii, ma ọ bụ mkpanaka. Ọrịa a na-emetụta ndị na-eto eto ma ọ bụ ndị na-adịghị ike.
Ngwurugwu a na-eme ka osisi na-egbu osisi, bụ nke epupụta na-amalite ịnwụ. N'ọgbụgba ụlọ ọrụ ahụ, a na-egbu osisi niile. Ịhụ na oge ntoju ube, na-ekpuchi epupụta ma ọ bụ mkpụrụ osisi, nke mbụ ị chọrọ iji belata atọ ma kpochapụ okpueze nke osisi ahụ.N'ihe dị elu karịa iru mmiri, ngwa ngwa ka ero na-amalite ma osisi ahụ anwụọ.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na osisi dị na ọnọdụ nke oke iru mmiri, mgbe ahụ, ọ na-adọrọ mmasị na mobile ọzọ.
N'ihe ịrịba ama mbụ nke odo ero, ịkwesịrị ịhazi osisi ahụ na fungicides. A ga-ewepụ oge ntoju nke malitere ero ahụ site na ogbo mmiri ma ọ bụ na ịsa ahụ.
Onye na-akpata ọrịa a bụ fungus Gymnosporangium sabinae. Carrier - juniper, nke ero a na-ese.
Ube nke cathedha na-egbu osisi junipa na mmiri mgbe spores nke ero chara n'onwe. Azu na-apụta ọ bụghị naanị epupụta, kamakwa petioles, mkpụrụ osisi na Ome.
Ihe ịrịba ama mbụ nke ọrịa na-apụta na July. N'elu elu nke epupụta ahụ na-acha ọbara ọbara nke ọdịdị oge. Ọ bụrụ na oge adịghị eme ihe iji kpochapụ ero a, mgbe ahụ, epupụta mkpụrụ nke ube ga-akpọnwụ ma daa.
Ọ bụrụ na ị chọpụta na nchara apụtawo na epupụta nke ube gị, mgbe mbụ gị kwesịrị ịkwụsị mgbasa nke ero ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ na epupụta na Ome na-egosi àgwà akara, mgbe ahụ, ị ​​ga-ebipụ ha ozugbo wee gbaa. Ọ bụrụ na ụda nke mmebi dị ntakịrị, mgbe ahụ ịkwesịrị ihicha ntụpọ ahụ na-edozi ahụ ma dozie ihe ngwọta nke blue vitriol.
Ọzọkwa maka ọgwụgwọ nke pears ọ dị mkpa iji na-emeso ọgwụ ndị na-egbu egbu, nke nwere ọla kọpa na sọlfọ. Ngwọta mbụ a na - ewere ọnọdụ na mgbe esemokwu ka nọ na osisi, na nke abụọ - mgbe okooko nke pears, mgbe esemokwu na - agbasa ozi ọma.
Ị ma? Ọ bụrụ na ị wụnyela pear pear si scab, mgbe ahụ, ọ dị mkpa ka ị ghara ịsa nchara.
Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ ahịhịa na-emerụ ahụ nke na-emetụta ọtụtụ osisi na-amị mkpụrụ. Akwukwo osisi na akwukwo akwukwo, akwukwo osisi, ma o bu uzo ubo ma wepu sap si osisi.
Ị ma? E nwere ụdị aphids ndị na-adị ndụ na mgbọrọgwụ osisi ahụ ma mebie ha.
E nwekwara nku umu aphid, bụ ndị na-ebugharị na ifufe ruo kilomita 25, na-etinye nsen maka oge ọzọ.
Ọ dị mkpa!Ọ bụrụ na ịchọta na e nwere ọtụtụ ndanda na mpaghara gị, lelee ogige maka aphids.
Mmebi nke aphid na-emejọ bụ nnukwu. Kpukpru eto ke in̄wan̄ emi ekeme ndidi nditubọk udia emi.
Maka igbochi na mkpochapụ nke aphids, nke mbụ Ọ dị mkpa na ụbịa iji bee na ọkụ emetụta alaka na aphids na ube epupụta.
Aphid na-ahọrọ osisi ndị na-eto eto. Tupu oge oyi, ọ dị gị mkpa iji nlezianya nyochaa osisi maka ọnụnọ nke àkwá ma were mmiri dị mita 70-80. Enwere ike ime nke a na oge opupu ihe ubi, tupu ube amalite igbatu epupụta.
Ikwusi aphids ga - enyere gi aka ibibi ogwu ndi na - echebe aphids. Enwere ike ime nke a na mmiri na-esi mmiri, na-agbanye ya na mmiri. Ịta atọ na fatịlaịza anaghị ekwe ka ị na-amanye ihe ọṅụṅụ site na osisi ahụ. Ọ dị mkpa mgbe niile ka ịchachaa osisi ahụ, ihichapụ ihe ochie ahụ, na-agbapụta n'ụgbụgbọ, nke aphid chọtara nnukwu ebe mgbaba.
Hawthorn bụ ububa mara mma nke na-efe efe n'oge ehihie. Akuku nku ya ruru 70 mm, ogwe nku dị ọcha (nwanyị) na nwa (ụmụ nwoke).
Hawthorn na-egosi na June ma nwee obere oge ndụ nke 1-2 izu. Ọ na-eri nanị na mmiri ara ehi ma na-aṅụ mmiri site na ịgbasa proboscis. Otu nru ububa nke hawthorn na-agba mbọ ịba akwa 500 maka oge dị mkpirikpi. Caterpillars na-etolite na ha ruo ụbọchị 15-16. Ha na-amalite iri mkpụrụ osisi osisi niile.
Ihe dịka izu atọ, caterpillars na-eri mkpụrụ osisi na-eto eto na-eto eto. Mgbe ahụ, site na mgbụsị akwụkwọ, na-etolite akwuru ma na-edozi ya n'oge ochie. Site na mmiri nke caterpillar Hawthorn, oge nke ịkwalite ọrụ na-amalite. Ha na-eri nri buds, mgbe ahụ, buds na epupụta. Onye kpara nkpa na-eri akwụkwọ dum, na-ahapụ naanị ọkpụkpụ ya.
Ha na-agwụcha oge ọrụ na-edozi ahụ mgbe okooko osisi pears na apụl dị. Mgbe ahụ, ha na-etinye aka na mbara ala, na-atụgharị n'ime pupae. Mgbe izu 2 gasịrị, nru ububa pụtara, dị njikere maka ịmụ nwa.
Bọfụfụ butterfly na-adịkarị ụkọ, na ọ na-adaberekarị n'ọnọdụ ihu igwe nke dị tupu ya. Iji luso ha ọgụ, ọ dị mkpa ibibi nsen, chịkọta ma gbaa nsị nru ububa, na-adọta ụmụ nnụnụ na-eri ụmụ ahụhụ. Ọ bụrụ na ị hụ na e nwere ihe karịrị 4 nests n'otu osisi, ọ dị mkpa ịmalite nhazi na ngwaahịa ndị dị ndụ ma ọ bụ ụmụ ahụhụ.
Enwere ike ichikota mkpuru ahihia nke wormwood: 750 g nke okpukpu kporo osisi na-agbanye mmiri ma na-esi ọnwụ ụbọchị abụọ, mgbe ahụ, obụpde maka minit 25 na ọkụ ọkụ na iwelie olu ruo lita 10. N'ime oge, a pụrụ ịkwadebe nkwadebe a ugboro isii kwa ụbọchị 5-7.
Ọtụtụ mgbe, ọdịdị nke ọkpọ na pear bụ nsonaazụ igwe. Ọ bụrụ na oyi na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ, mgbe ahụ chere na pussycatcher na pears.
Medianitsa, nke na-efe n'elu ube, dị iche na apụl nke na ọ na-agba ọchịchịrị ma nwee ọnyá odo na azụ. Ọtụtụ mgbe, ihe nkedo ndị dị n'okpuru mgbidi ochie nke ogbugbo osisi ahụ, n'okpuru akwụkwọ ndị dara ada.
Na oge opupu ihe ubi, mgbe a na-emebisị, onye na-eto eto na-adabere na nwata. Ha na-acha odo odo, ha siri ike ịhụ. Nne nwanyi ọ bụla nwere ike idozi nsen 300. Site na mkpụrụ ọ bụla dị otú ahụ, anụ ahụ na-acha aja aja na-arahụ, nke na-edozi na nwa osisi, pedicels, Ome ma na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ahụ site na ube.N'oge ọkọchị, otu onye na-agba ume nwere ike ịdakwasị ọgbọ atọ nke àkwá. N'ihi ike siri ike na mkpụrụ osisi ahụ na-eto n'ụzọ na-ezighi ezi, epupụta na-akọrọ ma daa, Ome ahụ na-akpọnwụ.
Medianitsa nwere aha a n'ihi mmiri ya na-ekpuchi igirigi, nke nwere ike igba mgbe ụfọdụ na osisi.
Iji lụọ ọgụ na onye na-aṅụ mmanụ aṅụ, ọ dị mkpa ka ị kpochapụ osisi ogwu ma daa ọkụ, mebie akwụkwọ ndị dara ada, kpochapụ ókèala ahụ n'akụkụ osisi ndị dị iche iche. Tupu pears oge ntoju, a ga-eji ihe nkedo 0.2% mee ihe na-ebili mgbe e mechara ya. Karbofos ma ọ bụ 0.3% ngwọta Chlorofos.
Onye ọ bụla na-elekọta ubi maara nke ọma ụdị ahụhụ ahụ dị ka ihe onyonyo. Nke a bụ obere ebe (ruo 4.5 mm), n'elu nku nke nwere ọnyá ndị na-agafe. Ebe a na-eburu oyi n'oge mgbagwoju anya nke ogbugbo, uzo, n'okpuru akwukwo dara ada, na ebe kachasi ezo.
Mgbe nzube ha na-abịa n'oge opupu ihe ubi, weego na-arịgo osisi. Ọ na-eri akụrụ, na-eme obere oghere n'ime ha. Mgbe buds malitere ịpụta, nwanyị Weevil na-etinye nsen n'ime ha, otu nwanyị na-emepụta ruo 100 nsen.
Ube ndị na-apụta site na nsen ndị a, na-eri ya n'ime ifuru ahụ, na-ejikọta ya na azụ ya, na-eme ka anụ ndị ahụ ghara ịkụ.
Mgbe okooko nke pears, ọgbọ ọhụụ nke na-apụta. Ha na-amalite iji nri na-eri nri pear, na-akwadebe maka oyiing.
A na-atụ aro ka a na-atụgharịkarị oge iji merie pesti a. Metaphos, Karbofos, Vafatoksom na ndị ọzọ Oge kachasị mma maka ọgwụgwọ na ngwọta ndị a bụ oge nke ịkụ nwa. Ọ bụrụ na ịchọta nsị ndị a na mgbọrọgwụ, mgbe ahụ mgbe owuwe ihe ubi gachara, a ga-agwọta osisi ahụ.
I nwekwara ike ime ka enweghi ihe ndi ozo di na ya ma tinye ha na manu oku.
Ọ dị mkpa! Akwụsị na-ekpo ọkụ dị mma na okpomọkụ adịghị elu karịa ogo 10, ebe ọ bụ na igwe na-ekpo ọkụ ka ha ga-efe efe.
Iji kpochapụ ube site na ikpofu, i choro kpoo ala n'okpuru osisi, kpochapu nkpuru osisi na akwukwo. Nwere ike tinye eriri na-adụkọta na eriri nke ube.
Ndepụta nke ihe nwere ike imerụ pusi ngalaba bụ nnukwu nnukwu. Ma na nlekọta na nlekọta kwesịrị ekwesị, ị nwere ike ichebe osisi ugbo gị site na pests na ọrịa. Isi ihe bụ mgbe mgbe iji meghachi omume n'ụdị iyi egwu a.
Nkọwapụta, foto na atụmatụ nke na-eto eto mkpụrụ osisi ahụ
Mkpụrụ vaịn: na-eto eto ma na-elekọta osisi mgbe ọ bụla
Nzuzo nke na-eto eto ma na-elekọta Peilea Peleymia n'ụlọ
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Kedu esi chebe "Katidral" ugwo site na oria na pests